Ukulinganisela Imali Yentlawulo Yentlawulo Yaseburhulumenteni
IMathematika Izifundo kunye neekhosi
Ingeniso Yakho kwiNkqubo yeRhafu yokuThuthuka ngeeBhanki zokuTyala eziNcinane
Umyinge waseMelika ufuna ukwabelana ncinane kumnye wemali yakhe kunye noMalume Sam. Kukho inqaku elithi, "Musa ukuyihlawula irhafu." Musa ukuhlawula irhafu.
Njengoko unokucinga, irhafu yengeniso ingabetha umvuzo womsebenzi. Ngezinye izibalo ezilula, unokwazi ukuba ingeniso yakho engenayo iya kuba yintoni.
Ukubala Imali engenayo
Ingeniso yakho efunyenwe ngumyinge wemali esalayo emva kokuhlawula irhafu yengeniso ye-federal.
Gcinani engqondweni, oku akunakwenzeka kwilizwe, isixeko, ukuthengisa okanye iirhafu zepropati. Ngoko ke, ngokweburhulumente wenkululeko, le nto ingaba yinzuzo yakho "yokulahlwa", nangona kunjalo, njengoko uhamba kuzo zonke iindleko zakho zokuhlala kunye nezinye iintlawulo, ingeniso yakho yexabiso engenayo ingaba yinto encinane kunokuba ucinge.
Imali Yakho kwiNkqubo yeRhafu eqhubela phambili
Xa uthatha umsebenzi omtsha, usenokuba uthethathethwano ngomvuzo omhle, ophezulu. Oko kuthetha ukuba unokulindela ukuba urhulumente wephondo uza kuthatha i-nice chunk yayo, nayo.
Inkqubo yerhafu yerhafu yenkonzo yaseFransi iqhubela phambili, oko kuthetha ukuba ukwenza okungaphezulu, iphakamileyo izinga lakho lentela. Abathengi abafumana ngaphantsi kwemali ethile ebekwe ngu rhu lumente baya kuhlawula encinane kwerhafu, ngelixa abasebenzi befumana amanqaku amathandathu okanye ngaphezulu ngonyaka banomlinganiselo wokuhlawula irhafu ovumelekileyo onokuba ngaphezulu kwama-25 ekhulwini.
Ukwenza iNgqiqo yeeBhanki zentela ephantsi
Inkqubo yerhafu isebenzisa iibhakethi zerhafu ezisixhenxe, ezithunyelwa njengendlela yokukhangela irhafu.
Oko okumele ukwenze ukuze uqikelele ngokukhawuleza uyazi umvuzo wakho kwaye ufumene ibhonksi yentela ekhoyo yangoku.
Ngokomzekelo, jonga i-bracket yerhafu ye-2017 kubantu abafakela abangatshatanga okanye abangatshatanga.
2017 Ireyithi yentlawulo
10% $ 0 ukuya kwi-9,325
15% $ 9,326 ukuya kuma-37,950
25% $ 37,951 ukuya kwii-91,900 zamaRandi
28% $ 91,901 ukuya kwii-191,650 zamaRandi
33% $ 191,651 ukuya kwii-416,700 zamaRandi
35% $ 416,701 ukuya kwii-418,400 zama-$
39.6% ngaphezu kwama-418,400
Ukuba uthayisha njengomntu omnye kwaye ufuna ukwenza ukuqikelela okukhawulezayo (kuya kuba yinto esondeleyo), unokujonga umvuzo wakho kwaye ukhangele ireyithi yentlawulo ehambelana nayo. Ukuba wenza i $ 100,000 ungalindela ukuhlawula ngaphezulu kwama-28 ekhulwini kwiirhafu zombuso okanye i-$ 28,000 kwiirhafu. Oku akuyi ku-akhawunti ngokuchithwa okanye nakwezinye iikhredithi ongazenzayo.
Enyanisweni, kuba le "yerhafu yerhafu yangaphandle" inkqubo yakho yerhafu yerhafu iya kuba phantsi kweepesenti ezingama-28 kuba ingeniso yakho ibhajethi yerhafu. Iintsingiselo, njengoko inzuzo yakho iyanda, ngoko uhlawuliswa ngokubhekiselele kuloo bhokisi, kwaye uya kuphakama uze ufike kwizinga lakho lokufumana umvuzo. Nasi umzekelo, ukuba ungatshati kwaye wenze i $ 100,000 ngonyaka:
I-$ 9,325 yokuqala eyayifumana ihlawuliswa kwi-10 ekhulwini kwi $ 932.50 (ibhonki yokuqala)
Emva koko, i-$ 28,625 elandelayo (i-$ 37,950- $ 9,325) eyayifumana ihlawuliswa kwipesenti ezili-15 kwi $ 4,293.75 (ibhonki yesibini)
Emva koko, i-$ 53,950 elandelayo oyifumene yerhafu kwi-25 yeepesenti kwi-13,487.25 yezigidi (i-bracket yesithathu)
Ekugqibeleni, i-$ 8,100 yokugqibela oyifumanayo (leyo izisa inani elipheleleyo lemali oyi-$ 100,000) yerhafu kwi-28 ekhulwini kwi $ 2,267.72 (ibhonki yakho yokugqibela)
Ufakela nganye yezo zibalo zerhafu kwi-bracket nganye kunye ($ 932.50 + $ 4,293.75 + $ 13,487.25 + $ 2,267.72 = $ 20,981.22).
Isantya sakho serhafu, esaziwayo njengerhafu yakho yerhafu efanelekileyo, ngokwenene isondele kuma-21 eepesenti, ebala ukuba ibe ngaphantsi kwe-$ 21,000. Oku kungaphantsi kwama-28 kweepesenti (okanye i-$ 28,000) ukuba itheyibhile yerhafu yerhafu ingakhokelela ukuba ukholelwe ukuba uya kuba netyala.
Indlela yokubala i-Male to Female Ratio (kunye nezinye izinto)
Ukutshintsha ukusuka kwiBakala 10 ukuya kwisiSekelo 2
Ipropati yoNxulumano kwiMathematika
Imathematika: Okufunekayo Ukufunda i-Calculus
Indlela yokuSombulula iNgxowa
Ukuhlaziywa kweMilinganiselo yokuLungisa, imibuzo kunye nezimpendulo.
IPythagorean Theorem Visual Aid
Ukwenza Intlawulo Ekhethekileyo kwiNgxowa-mboleko elula
Ukuqonda Ixabiso Lendawo
Imizekelo yeNgxaki yokuCombulula kunye ne-4
Ipesenti yenguqu: Ukwandisa nokunciphisa
Iimpazamo eziqhelekileyo ngesiNgesi - ezilungileyo kunye no-Well
Funda indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "Umdluli" (ukuba adlule)
I-Whig Party kunye nabaPhathiswa bayo
Yintoni 'i-Ballstriker enhle' eGoli?
I-109-Pound Shrimp Efunyanwa eFlorida
Iipateni Zokuhlala - Ukufunda Ukuguquka Kwezenkcubeko
I-Voice Passive in German
I-Sol Inkcazo kwiKhemistry
Umlilo kunye ne-Ice: Ukuxuba i-Glaciers Kucala ukuguquka komhlaba, iiTsunami kunye neentaba
I-10 ye-Johnny Depp yamaFilimu aphezulu
Imibuzo Yemibuzo Yeengxoxo kunye Neempendulo
UElisha: Iprofayili & Imifanekiso kaElisha, umProfethi weTestamente elidala kunye nomfanekiso weBhayibhile
Uthi Njani 'UFrentshi?
IiKlasi zamaHebhere zamahhala
IsiFrentshi-IsiNgesi sokuPeliswa kwamaLwimi
Iindlela ezili-10 ezilula zabafundi zokuphakamisa amanqaku abo eFICO
Ukubethelelwa kukaYesu emnqamlezweni kwakude kangakanani?
Inkambo yokuFundisisa yeeNyaka eziQalayo
Imvelaphi yeNguqulelo yesiFrentshi kwi-Ancien Régime
Isishwankathelo soMongameli we-2016
Ukutyelela iSitishi saMazwe ngamazwe
Iingoma Zomculo Ezivakalayo Njenge-Elvis
Yiyiphi i-States of Matter?
Imfazwe YaseMelika: Imfazwe yaseGettysburg - I-East Cavalry Fight
UMon Beau Sapin - IKarimesi yeKrisimesi yeKarimesi